KoAung NaingMoe, Bangkok (2022)
หน้าหลัก > ประเทศไทย > Bangkok > บริการขนส่ง > KoAung NaingMoe
شركة المتسابق للاستيراد والتصدير Almutasabik Import
้One day trip เกาะช้าง เรือเหมาดำน้ำ
274/1 Sukhumwit Rd, Chon Buri
เที่ยวเล by long tail boat Aonang krabi
Durian Kingdom by NooTao
CRPH ၏ နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်များကို လက်ခံ၍ရသော်လည်း ပိုမိုပွင်းလင်းရန် လိုအပ်ကြောင်း ရခိုင်အသိုင်းအဝိုင်းကဆို
DMG ၊ မတ် ၇
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖျက်သိမ်းရေးနှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို အခြေခံသည့် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေ ပေါ်ပေါက်ရေးတို့သည် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ (CRPH) ၏ နိုင်ငံရေး ရည်မှန်းချက်များဖြစ်ကြောင်း ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၅ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။
CRPH အနေဖြင့် စစ်အာဏာရှင်စနစ်နှင့် စစ်အာဏာသိမ်းသံသရာ ချုပ်ငြိမ်းပြီး ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို အခြေခံသည့် နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက် အထက်ဖော်ပြပါ နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်များအပါအဝင် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေး၊ သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်နှင့် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသူအားလုံး လွတ်မြောက်ရေး၊ ဒီမိုကရေစီရရှိရေးတို့ဖြစ်ကြောင်း CRPH ၏ ထုတ်ပြန်ချက်က ဆိုသည်။
အဆိုပါ ကြေညာချက်မှာ ထုတ်ပြန်ချက်အနေဖြင့်ကောင်းသော်လည်း CRPH အနေဖြင့် လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးအင်အားစု (EAOs) များနှင့် ထိတွေ့ပြောဆိုဆက်ဆံမှုများ ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းနှင့် ပြောဆိုသည့်အတိုင်း လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရန်လိုအပ်ကြောင်း ဝံလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ဖောင်ဒေးရှင်း၏ ဒါရိုက်တာ ဦးခိုင်ကောင်းစံ ကပြောသည်။
“ တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊ EAOs တွေကအစ ပြီးခဲ့တဲ့ NLD အစိုးရအပေါ်မှာ ယုံကြည်မှုတွေ အားနည်း လာတယ်၊ ပျောက်ပယ်လာတယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့လည်း ဆက်ဆံမှုတွေက ပျောက်ပယ်အားနည်းခဲ့တဲ့ အတွက် အဆင်မပြေမှုတွေအများကြီးရှိတယ်။ ဒါတွေကို တည်ဆောက်ရဖို့အတွက် လက်တွေ့ဆန်တဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေကို လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ် ” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
CRPH ၏ ရည်မှန်းချက်များတွင် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီဆိုသည့်အသုံးအနှုန်များနှင့် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေ ဖျက်သိမ်းရေးစသည့် အချက်များပါဝင်လာခြင်းသည် တိုင်းရင်းသားများအနေဖြင့် လက်ခံလို့ရသည့် အနေအထားတွင်ရှိသော်လည်း ယုံကြည်ရန်အတွက် ခက်ခဲသည့်အနေအထားတွင် ရှိနေသည်ဟု ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(ALD) ပါတီ အတွင်းရေးမှူး ဦးမျိုးကျော်က ပြောသည်။
“ အခုထုတ်ပြန်တာက ကျနော်တို့နဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေတောင်းဆိုနေတာကို အရိပ်အယောင်မြင်ရတယ်။ အဲဒီမှာ သုံးထားတွေက ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့အရာမျိုးတွေပါလာတယ်။ နောက် ဖွဲ့စည်းပုံဖျက်သိမ်းရေးဆိုတဲ့အရာ တွေပါလာတယ်။ ဒါတွေက တိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့ လက်ခံလို့ရတဲ့အနေအထားဖြစ်လာတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြည်ထောင်စုထဲမှာရှိနေတဲ့ တိုင်းရင်သားတွေက အမြဲတမ်းအဲဒီစကားလုံးတွေ၊ ဝေါဟာရတွေနဲ့နေပြီး လှည့်စားမှုတွေကို ခံစားကြရတယ်။ ဒါကြောင့် ယုံကြည်ဖို့အတွက် ဒီထက်ပွင့်လင်းတဲ့အသုံးအနှုန်းမျိုးနဲ့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင် ရေးဖို့၊ ပြောဖို့လိုတယ်” ဟု သူကပြောသည်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီသည် အဆိုပါနိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်များ အပြည့်အဝအောင်မြင်စေရေးအတွက် တိုင်းရင်းသားပြည်သူတစ်ရပ်လုံးနှင့် အတူလက်တွဲကာ မမှိတ်မသုန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း လေးနက်စွာ ကတိသစ္စာပြုအပ်သည်ဟု CRPH ၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ရေးသားထားသည်။
နိုင်ငံတော်အာဏာကို တပ်မတော်မှသိမ်းပြီးနောက်တွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ (CRPH) ကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD) ပါတီမှ အနိုင်ရ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အများစုက ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။
KoAung NaingMoe updated their info in the about section.
KoAung NaingMoe updated their address.
မကြာခင်မှာ စာအုပ်သက်တမ်းကုန်သွားတော့မည့်သူများက အားလုံးအောက်ပါအတိုင်းသေချာလေး ရေးပြပေးထားပါတယ်။
2021-1/1 ရက်မှ စတင်ပြီး 2021/8/3 ရက်နေ့ အတွင်း ဗီဇာ သက်တမ်းကျော်လွန်သူများ ဗီဇာ သေသူများပေါ့နော်- သူဌေးပြောင်းပြီး နောက်ထပ်သူဌေးအသစ် ပြောင်းမရသေးသူများ-ဘိုင်ကျန့်အော့ ထုပ်မရ သူများ - ဘိုင်ကျန့်အော့ သေသူများ - အားလုံး သည် အောက်ပါ အုပ်စုများ အားလုံးသည်အသစ်ပြန်လုပ်လို့ ရပါသည်။
MOU4နှစ် ပြည့်သူများ2နှစ် ပြည့်သူများလည်း အပါအဝင်ဖြစ်ပါသည်။
စာအုပ်ကုန်သူများက ပါမစ် ကို အရင် လျှောက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်
စာအုပ်ကိုတော့ နောက်မှ ပြန်လုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်
အခုတော့ စာအုပ် ထုပ်လုပ်ပေးတဲ့ ရုံးများ မဖွင့်သေးပါ(မဟာချိုင်ထလေထိုင်း)
📌30/9/2021 ရက်​နေ့ကုန် ပန်း​ရောင်ကဒ် အုပ်စုများသည်
ဒီလ 30/9/2021 ရက်​နေ့ မတိုင်မှိ အလုပ်လုပ်ခွင့် (​​ဝေါ့ပါမစ်)ကို ​လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်ပါသည်။
📌31/3/2022 ရက်​နေ့ကုန်ကြမည့် ​ဘော်​တာ်23+ပန်း​ရောင်ကဒ်အုပ်စုများအားလုံးသည် လာမဲ့နှစ် 31/3/2022 ရက်​နေ့ မတိုင်မှိ (​​ဝေါ့ပါမစ်)ကို ​လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်ပါသည်။
📌30/9/2021+31/3/2022 ရက်​​​​နေ့ကုန် အုပ်စုများသည်
​ဝေါ့ပါမစ် သက်တမ်းမကုန်ခင် မိမိ အလုပ်ရှင်နယ်​မြေ ကျဟာငန်ရုံး သို့ သွား​ရောက် ​လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။
📌MOU+CI စာအုပ်အသစ်လဲချင်း+ဗီဇာတိုးချင်း နှင့် ကျန်မာ​ရေးစစ်​ဆေးချင်းကို​တော့ 1/8/2022 ရက်​နေ့ မတိုင်မှိ အပြီး ​ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
📌1/1/2021 ရက်​နေ့မှ 3/8/2021 ရက်​နေ့အတွင်း
ဗီဇာ​သေ+ပါမစ်​​သေ+ကျန့်​အော်​သေ​နေ​သောအုပ်စုများက​တော့ 3/12/2021 ရက်​နေ့အတွင်း အလုပ်လုပ်ခွင့်
(​ဝေါ့ပါမစ်)အသစ် ​ဘော်​တော်(50)ကို ​လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပါတယ်။
📌​ဘော်​တော်(48)အုပ်စု မိမိ အလုပ်​ရှင်နယ်​မြေ
ကျဟာငန်ရုံးသို့ သွား​ရောက် (​​ဝေါ့ပါမစ်)ဘော်သော်(39)စာအုပ်ထူတ်ယူရန် နာမည်စာရင်းတင်ရမည်ဖြစ်သည်။
ဆက်သွယ်ရန် = = 06-2020-3030
တပ်မတော်နဲ့ ရက္ခိုင့်တပ်တော်(AA)တို့ရဲ့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုတွေကြောင့် ကျောက်တော်မြို့နယ် မာလာကျေးရွာ ကနေ အိုးအိမ်ပစ္စည်းတွေကိုစွန့်ခွာပြီး မြို့ပေါ်ကိုစစ်ဘေးရှောင်တိမ်းလာကြတဲ့ ကျေးရွာသားအချို့ဟာ ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက်နေ့က သူတို့ရဲ့လိုလားချက်တွေကို ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပြီး တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
စစ်ဘေးရှောင်တွေက ဘာတွေကိုတောင်းဆိုကြသလဲဆိုတာကို ရုပ်သံမှာအပြည့်အစုံကြည့်ရှုပါ။
သတင်း - မြတ်ဆွေ၊ တည်းဖြတ် - တိုးမြတ် | DMG
တပ်မတော်နဲ့ ရက္ခိုင့်တပ်တော်(AA)တို့ရဲ့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုတွေကြောင့် ကျောက်တော်မြို့နယ် မာလာကျေးရွာကနေ အိုးအိမ်ပစ္စည်းတွေကိုစွန့်ခွာပြီး မြို့ပေါ်ကိုစစ်ဘေးရှောင်တိမ်းလာကြတဲ့ ကျေးရွာသားအချို့ဟာ ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက်နေ့က သူတို့ရဲ့လိုလားချက်တွေကို ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပြီး တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
စစ်ဘေးရှောင်တွေက ဘာတွေကိုတောင်းဆိုကြသလဲဆိုတာကို ရုပ်သံမှာ အပြည့်အစုံကြည့်ရှုပါ။
ကော့စမွီ ကျွန်ပေါ် ရဲစခနိး အတွင်း အချုပ်နှောင်ခံ မြန်မာအမျိုးသမီး ၁ ဦးအပေါ် အလိုမတူ သားမယား ပြုကျငိ့မှု (မုဒိန်းမှု) အား မြန်မာသံရုံး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ နှင့် ထိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ စုံစမ်းရေး အဖွဲ့တို့ ပထမ နေ့တွေ့ဆုံ ရာတွင် ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ မှ
တရားခံ အား စွဲချက် ၄ချက် ဖြင့် အမှုစွဲဆိုထားကြောင်း
ရဲတပ်ဖွဲ့ မှ တရားခံအား အာမခံ ခွင့် ပိတ်ပင် ထားသော်လည်း တရားရုံး တော်မှ တရားခံ သည် ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်ရန် ရည်ရွယ်ချက် မရှိကြောင်း ယုံကြည် သဖြင့် တရားခံ ၏ ခံစားခွင့် ကို ဥပဒေ နှင့် အညီ အာမခံခွင့် ပေးလိုက်ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှ တင်ပြပါသည်။
ဆက်လက်၍ မြန်မာ သံရုံး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ သည်
တရားလို မြန်မာအမျိုးသမီး မမိုး နှင့် တွေ့ဆုံခွင့်ရရှိပြီး လိုအပ်သည့် အချက်အလက် များကို မေးမြန်း စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။
လာမည့် ဇန်နဝါရီ ၁၈ ရက် တနင်္လာနေ့ မွန်းလွဲ ၁နာရီတွင် တရားလို နစ်နာသူ မြန်မာအမျိုးသမီး မမိုး အား တရားရုံးတော် မှ ကနဦး အချက်အလက် စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပြီး မြန်မာသံရုံး အထူး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ မှ တက်ရောက်ခွင့် ရရှိမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရပြီး
အမှု ကြားနာစဉ်ကာလ တရားလိုအမျိုးသမီး အား လုံခြုံ သင့်တော်သော နေရာတွင် ထိမ်းသိမ်း စောင့်ရှောင့်ထားရန်
ထိုင်း လဝက IMMIGRATION6တာဝန်ရှိသူများ နှင့် မြန်မာ သံရုံး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ တို့မှ ညှိနိုင်း စီစဉ် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်
MIGRANT PROTECTION COMMITTEE
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖမ်းဆီးခံရတာ အများဆုံး
၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ခြောက်ရာနီးပါး ရှိခဲ့ကြောင်း AAPP ပြော
■ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၅၉၀ ရှိပြီး ထောင်ကျခံနေရတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၃၅ ယောက်အထိရှိတယ်လို့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက် ရေးအသင်း AAPP က ပြောပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ဖမ်းဆီးခံရမှုအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ လည်းဆိုပါတယ်။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (AAPP) က ၂၀၂၀ နှစ်ဆန်းကနေ နိုဝင်ဘာလကုန်အထိ ကောက်ယူခဲ့တဲ့ စာရင်းတွေအရ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၅၉၀ ရှိပြီး အဲဒီထဲမှာ ထောင်ကျခံနေရတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၃၅ ယောက်၊ ထောင်ထဲကနေ တရားရင်ဆိုင်နေရသူ ၁၉၉ ယောက်နဲ့ ထောင်အပြင်ကနေ တရားရင်ဆိုနေရသူ ၃၅၆ ယောက်ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ တပ်မတော်နဲ့ ရက္ခိုင့်တပ်တော် AA တို့ရဲ့ တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖမ်းဆီးခံရတာ အများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ AAPP ရဲ့ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး ဦးဘိုကြည်က ပြောပါတယ်။
“ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့ အဖမ်းဆီးခံရတာ အများဆုံးပဲ။ အဲဒါကတော့ တပ်မတော်နဲ့ AA ရဲ့ လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေရဲ့ ဆိုးကျိုးတွေပေါ့နော်။ ရွာသူရွာသားတွေက AA ကို ကူညီပံ့ပိုးတယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေနဲ့ အထိန်းသိမ်းခံနေရတာရှိတယ်၊ သူတို့ကို အကြမ်းဖက်မှုဥပဒေတွေနဲ့ စွဲထားတာရှိတယ်။ အဲလိုပဲ AA ဘက်ကနေပြီးတော့လည်း ဖမ်းထားတာတွေရှိတယ်။ တိုင်းရင်းသားဒေသတွေက လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲနဲ့ နီးကပ်ရာမှာ နေတဲ့သူတွေကတော့ နှစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခြင်းခံနေရတဲ့အပြင် တချို့က ဖမ်းဆီးခံနေရချိန် စစ်ကြောရေးဝင်ရင် အသက်ဆုံးရှုံးရတာတွေလည်း ရှိပါတယ်”
ရခိုင်ပြည်နယ်က တိုက်ပွဲတွေနဲ့ဆက်စပ်ပြီး အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေတွေနဲ့ ဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဦးရေ ၁၅၆ ယောက်ရှိပြီး ရခိုင်ဒေသမှာ တခြား နိုင်ငံတော် အကြည်ညိုပျက်စေမှုပုဒ်မတွေ၊ ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးခွင့်နဲ့ စီတန်းလှည့်ခွင့်ဆိုင်ရာပုဒ်မတွေလို ဥပဒေတွေနဲ့ ဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုခံရသူ စုစုပေါင်း ၁၈၁ ယောက်ရှိတယ်လို့ ဦးဘိုကြည်က ဆိုပါတယ်။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အစိုးရရဲ့ တုံ့ပြန်ချက်ကိုသိနိုင်ဖို့ အစိုးရရုံး ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကို ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမယ့်လည်း အကြောင်းမပြန်ပါဘူး။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ဦးရေတိုးလာရတဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းတွေထဲမှာ ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့် နှစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ ထိန်းသိမ်းတာခံရတာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပါဝင်သလို နိုင်ငံတော် အကြည်ညိုပျက်စေမှုပုဒ်မတွေ၊ ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးခွင့်နဲ့ စီတန်းလှည့်ခွင့်ဆိုင်ရာပုဒ်မတွေအပြင် လယ်ယာမြေသိမ်းဆည်းမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထိန်းသိမ်းခံထားရတာတွေလည်း ပါဝင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေကို ဘယ်လို ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အသုံးပြုလည်းဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်သလို ပြည်သူလူထုကို ဦးတည်ထားတဲ့ ဥပဒေဖြစ်ပြီး လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေကို ဦးတည်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ရှင်းနေတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်လို့ သဇင်ဥပဒေ အထောက်အကူပြုအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမျိုးမြတ်ဟိန်းက ပြောပါတယ်။
“ဒါက ဥပဒေကို ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ သုံးတာလဲပေါ့၊ ဒါကို ကျွန်တော်တို့က မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်တယ်။ ဒီဥပဒေက တကယ်တော့ ပြည်သူလူထုကို ဦးတည်ထားတာဖြစ်တယ်။ အခုလို နိုင်ငံရေးအရ မကျေလည်မှုနဲ့ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကို ဦးတည်ထားတာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါက ရှင်းလင်းမြင်သာနေတဲ့ အချက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဥပဒေကို လွယ်လွယ်ကူကူပဲသုံးတယ် ဒါက ဥပဒေကို အလွဲသုံးတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ ဒီဟာတွေကြတော့။ ဒီဥပဒေက ရှိတော့ ရှိသင့်တယ် ဒါပေမဲ့ အခုလို လက်နက်မဲ့ပြည်သူလူထုကို အဓိကဦးတည်ပြီးတော့ အကြမ်းဖက်တဲ့အဖွဲ့တွေကို သုံးသင့်တဲ့ ဥပဒေမျိုးပါ တကယ်တော့”
သဇင်ဥပဒေ အထောက်အကူပြုအဖွဲ့ဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းက အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပေဒနဲ့ တရားစွဲဆို ထောင်ချခံထားရသူတွေရဲ့ အမှုတွေကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။
အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနဲ့ တရားစွဲခံရတဲ့ အမှုတိုင်းမှာ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေက မိသားစုနဲ့ တွေ့ခွင့်မပေးတာ၊ ရှေ့နေနဲ့ တွေ့ခွင့်မပေးတာတွေဟာ ဥပေဒကြောင်းအရရော၊ လူ့အခွင့်အရေးအရရော ပြည်သူတွေက အများကြီးဆုံးရှုံးရတယ်လို့လည်း ဦးမျိုးမြတ်ဟိန်းက ပြောပါတယ်။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရှိနေတာဟာ မတရားတဲ့ ဥပဒေတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ ပြယုဂ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး၊ လုံခြုံရေးနဲ့ မတရားတဲ့ဥပဒေတွေ အသုံးပြုဖမ်းဆီးတာအားလုံး ရပ်တန့်ဖို့လိုတယ်လို့ ညီမျှခြင်းမြန်မာရဲ့ အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအောင်မျိုးမင်း ပြောပါတယ်။
“နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားရှိခြင်းတွေက ကိုယ်ကိုတိုင်က မတရားတဲ့ ဥပဒေတွေရှိနေတယ်။ အစိုးရကိုယ်တိုင်က ဒီဥပဒေကို လိုသလိုအသုံးချပြီးတော့ ဖမ်းဆီးမှုရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ ပြယုဂ်ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေက ရှိကိုမရှိသင့်ဘူး။ အထူးသဖြင့် ဒီနောက်ပိုင်းမှာ လူ့အခွင့်အရေးကိစ္စ အချိုးဖောက်မှု အများဆုံးဖြစ်နေတဲ့ ရခိုင်ဒေသမှာဖြစ်နေခြင်းကိုယ်တိုင်က ပြည်သူလူထုက စစ်ပွဲဒဏ်အရရော၊ မတရားတဲ့ဥပဒေတွေနဲ့ ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ကိစ္စတွေ ပိုများနေတာတွေ့ရတဲ့အတွက် အဲလိုဒေသအတွင်းမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးရော၊ လုံခြုံရေးရော၊ မတရားတဲ့ဥပဒေတွေ အသုံးပြုဖမ်းဆီးတာတွေအားလုံး အမြန်ဆုံးရပ်တန့်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်”
မတရားဥပဒေနဲ့ ဖမ်းဆီးထောင်ချခံထားရသူတွေကို အမြန်ုဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့လိုသလို ဒါမှသာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကင်စင်ပြီး အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးကို လေးစားတဲ့နိုင်ငံအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်း ဦးအောင်မျိုးမင်းက ထောက်ပြပါတယ်။
နောက်ထပ် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဖြစ်မလာအောင် ပြင်ဆင်သင့်တဲ့ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်ပြီး မတရားဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ နစ်နာမှုတွေကို ဘယ်လိုကုစားပေးမလဲဆိုတာ လိုအပ်တယ်လို့ ဦးအောင်မျိုးမင်းက ဆိုပါတယ်။
တပ်မတော်ကို အကြည်ညိုပျက်အောင် လူမှုကွန်ရက်မှာ ရေးသားတာ၊ ဟောပြောတာ၊ သံချပ်တိုက်တာ စတဲ့ ဒီလိုဖြစ်ရပ်တွေကြောင့် လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့ ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ၊ အကြည်ညိုပျက်စေမှု ပုဒ်မ ၅၀၅(က) အပါအဝင် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်တွေကို ပိတ်ပင်တဲ့ ဥပဒေတွေကို ပြုပြင်ဖို့လိုအပ်နေသလို လက်ရှိနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ အမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့ကိုလည်း AAPP အပါအဝင် လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းတွေက တိုက်တွန်းနေကြပါတယ်။
အစိုးရအဆက်ဆက် မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမရှိကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သလို လက်ရှိ NLD အစိုးရထက်ထက်မှာလည်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား သတ်မှတ်ချက်မရှိကြောင်း ပြောဆိုထားပါတယ်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဖေသန်းက နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်က NLD အစိုးရလက်ထက် နိုင်ငံရေးပြစ်မှု၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား စတဲ့ ဝေါဟာရတွေအတွက် အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ပေးဖို့ ရှိ၊ မရှိ လွှတ်တော်မှာ မေးမြန်းခဲ့ပေမယ့် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ် အောင်စိုးက ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ တည်ဆဲဥပဒေတွေမှာ ဖော်ပြပါရှိခြင်းမရှိတာကြောင့် အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ဖွင့်ဆိုပေးရန် မရှိဘူးလို့ ဖြေကြားထားပါတယ်။
၂၀၁၉ ဧပြီလ ၂၂ ရက်နေ့ကလည်း အကျဉ်းစီးဌာနက အကျဉ်းထောင်တွေမှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဆိုပြီး သတ်မှတ်ထားတဲ့ အကျဉ်းသူ၊ အကျဉ်းသား မရှိဘူးလို့ ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
လက်ရှိ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်၊ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ တိုင်းဒသကြီးနဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်တွေ၊ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အများစုဟာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ဖြစ်ခဲ့ဖူးသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လက်ရှိ NLD အစိုးရလက်ထက် ၅ နှစ်သက်တမ်းမှာ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် သတ်မှတ်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိသလို နောက်ထပ် ၅ နှစ်အစိုးရသက်တမ်းမှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတွေ လိုလားနေတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်နိုင်ဖို့ ဘယ်လောက်အထိ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ခြောက်ရာနီးပါး ရှိခဲ့ကြောင်း AAPP ပြော
■ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၅၉၀ ရှိပြီး ထောင်ကျခံနေရတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၃၅ ယောက်အထိရှိတယ်လို့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက် ရေးအသင်း AAPP က ပြောပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ဖမ်းဆီးခံရမှုအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ လည်းဆိုပါတယ်။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (AAPP) က ၂၀၂၀ နှစ်ဆန်းကနေ နိုဝင်ဘာလကုန်အထိ ကောက်ယူခဲ့တဲ့ စာရင်းတွေအရ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၅၉၀ ရှိပြီး အဲဒီထဲမှာ ထောင်ကျခံနေရတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၃၅ ယောက်၊ ထောင်ထဲကနေ တရားရင်ဆိုင်နေရသူ ၁၉၉ ယောက်နဲ့ ထောင်အပြင်ကနေ တရားရင်ဆိုနေရသူ ၃၅၆ ယောက်ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ တပ်မတော်နဲ့ ရက္ခိုင့်တပ်တော် AA တို့ရဲ့ တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖမ်းဆီးခံရတာ အများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ AAPP ရဲ့ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး ဦးဘိုကြည်က ပြောပါတယ်။
“ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့ အဖမ်းဆီးခံရတာ အများဆုံးပဲ။ အဲဒါကတော့ တပ်မတော်နဲ့ AA ရဲ့ လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေရဲ့ ဆိုးကျိုးတွေပေါ့နော်။ ရွာသူရွာသားတွေက AA ကို ကူညီပံ့ပိုးတယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေနဲ့ အထိန်းသိမ်းခံနေရတာရှိတယ်၊ သူတို့ကို အကြမ်းဖက်မှုဥပဒေတွေနဲ့ စွဲထားတာရှိတယ်။ အဲလိုပဲ AA ဘက်ကနေပြီးတော့လည်း ဖမ်းထားတာတွေရှိတယ်။ တိုင်းရင်းသားဒေသတွေက လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲနဲ့ နီးကပ်ရာမှာ နေတဲ့သူတွေကတော့ နှစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခြင်းခံနေရတဲ့အပြင် တချို့က ဖမ်းဆီးခံနေရချိန် စစ်ကြောရေးဝင်ရင် အသက်ဆုံးရှုံးရတာတွေလည်း ရှိပါတယ်”
ရခိုင်ပြည်နယ်က တိုက်ပွဲတွေနဲ့ဆက်စပ်ပြီး အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေတွေနဲ့ ဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဦးရေ ၁၅၆ ယောက်ရှိပြီး ရခိုင်ဒေသမှာ တခြား နိုင်ငံတော် အကြည်ညိုပျက်စေမှုပုဒ်မတွေ၊ ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးခွင့်နဲ့ စီတန်းလှည့်ခွင့်ဆိုင်ရာပုဒ်မတွေလို ဥပဒေတွေနဲ့ ဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုခံရသူ စုစုပေါင်း ၁၈၁ ယောက်ရှိတယ်လို့ ဦးဘိုကြည်က ဆိုပါတယ်။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အစိုးရရဲ့ တုံ့ပြန်ချက်ကိုသိနိုင်ဖို့ အစိုးရရုံး ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကို ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမယ့်လည်း အကြောင်းမပြန်ပါဘူး။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ဦးရေတိုးလာရတဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းတွေထဲမှာ ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့် နှစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ ထိန်းသိမ်းတာခံရတာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပါဝင်သလို နိုင်ငံတော် အကြည်ညိုပျက်စေမှုပုဒ်မတွေ၊ ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးခွင့်နဲ့ စီတန်းလှည့်ခွင့်ဆိုင်ရာပုဒ်မတွေအပြင် လယ်ယာမြေသိမ်းဆည်းမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထိန်းသိမ်းခံထားရတာတွေလည်း ပါဝင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေကို ဘယ်လို ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အသုံးပြုလည်းဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်သလို ပြည်သူလူထုကို ဦးတည်ထားတဲ့ ဥပဒေဖြစ်ပြီး လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေကို ဦးတည်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ရှင်းနေတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်လို့ သဇင်ဥပဒေ အထောက်အကူပြုအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမျိုးမြတ်ဟိန်းက ပြောပါတယ်။
“ဒါက ဥပဒေကို ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ သုံးတာလဲပေါ့၊ ဒါကို ကျွန်တော်တို့က မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်တယ်။ ဒီဥပဒေက တကယ်တော့ ပြည်သူလူထုကို ဦးတည်ထားတာဖြစ်တယ်။ အခုလို နိုင်ငံရေးအရ မကျေလည်မှုနဲ့ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကို ဦးတည်ထားတာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါက ရှင်းလင်းမြင်သာနေတဲ့ အချက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဥပဒေကို လွယ်လွယ်ကူကူပဲသုံးတယ် ဒါက ဥပဒေကို အလွဲသုံးတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ ဒီဟာတွေကြတော့။ ဒီဥပဒေက ရှိတော့ ရှိသင့်တယ် ဒါပေမဲ့ အခုလို လက်နက်မဲ့ပြည်သူလူထုကို အဓိကဦးတည်ပြီးတော့ အကြမ်းဖက်တဲ့အဖွဲ့တွေကို သုံးသင့်တဲ့ ဥပဒေမျိုးပါ တကယ်တော့”
သဇင်ဥပဒေ အထောက်အကူပြုအဖွဲ့ဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းက အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပေဒနဲ့ တရားစွဲဆို ထောင်ချခံထားရသူတွေရဲ့ အမှုတွေကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။
အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနဲ့ တရားစွဲခံရတဲ့ အမှုတိုင်းမှာ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေက မိသားစုနဲ့ တွေ့ခွင့်မပေးတာ၊ ရှေ့နေနဲ့ တွေ့ခွင့်မပေးတာတွေဟာ ဥပေဒကြောင်းအရရော၊ လူ့အခွင့်အရေးအရရော ပြည်သူတွေက အများကြီးဆုံးရှုံးရတယ်လို့လည်း ဦးမျိုးမြတ်ဟိန်းက ပြောပါတယ်။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရှိနေတာဟာ မတရားတဲ့ ဥပဒေတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ ပြယုဂ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး၊ လုံခြုံရေးနဲ့ မတရားတဲ့ဥပဒေတွေ အသုံးပြုဖမ်းဆီးတာအားလုံး ရပ်တန့်ဖို့လိုတယ်လို့ ညီမျှခြင်းမြန်မာရဲ့ အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအောင်မျိုးမင်း ပြောပါတယ်။
“နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားရှိခြင်းတွေက ကိုယ်ကိုတိုင်က မတရားတဲ့ ဥပဒေတွေရှိနေတယ်။ အစိုးရကိုယ်တိုင်က ဒီဥပဒေကို လိုသလိုအသုံးချပြီးတော့ ဖမ်းဆီးမှုရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ ပြယုဂ်ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေက ရှိကိုမရှိသင့်ဘူး။ အထူးသဖြင့် ဒီနောက်ပိုင်းမှာ လူ့အခွင့်အရေးကိစ္စ အချိုးဖောက်မှု အများဆုံးဖြစ်နေတဲ့ ရခိုင်ဒေသမှာဖြစ်နေခြင်းကိုယ်တိုင်က ပြည်သူလူထုက စစ်ပွဲဒဏ်အရရော၊ မတရားတဲ့ဥပဒေတွေနဲ့ ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ကိစ္စတွေ ပိုများနေတာတွေ့ရတဲ့အတွက် အဲလိုဒေသအတွင်းမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးရော၊ လုံခြုံရေးရော၊ မတရားတဲ့ဥပဒေတွေ အသုံးပြုဖမ်းဆီးတာတွေအားလုံး အမြန်ဆုံးရပ်တန့်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်”
မတရားဥပဒေနဲ့ ဖမ်းဆီးထောင်ချခံထားရသူတွေကို အမြန်ုဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့လိုသလို ဒါမှသာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကင်စင်ပြီး အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးကို လေးစားတဲ့နိုင်ငံအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်း ဦးအောင်မျိုးမင်းက ထောက်ပြပါတယ်။
နောက်ထပ် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဖြစ်မလာအောင် ပြင်ဆင်သင့်တဲ့ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်ပြီး မတရားဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ နစ်နာမှုတွေကို ဘယ်လိုကုစားပေးမလဲဆိုတာ လိုအပ်တယ်လို့ ဦးအောင်မျိုးမင်းက ဆိုပါတယ်။
တပ်မတော်ကို အကြည်ညိုပျက်အောင် လူမှုကွန်ရက်မှာ ရေးသားတာ၊ ဟောပြောတာ၊ သံချပ်တိုက်တာ စတဲ့ ဒီလိုဖြစ်ရပ်တွေကြောင့် လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့ ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ၊ အကြည်ညိုပျက်စေမှု ပုဒ်မ ၅၀၅(က) အပါအဝင် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်တွေကို ပိတ်ပင်တဲ့ ဥပဒေတွေကို ပြုပြင်ဖို့လိုအပ်နေသလို လက်ရှိနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ အမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့ကိုလည်း AAPP အပါအဝင် လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းတွေက တိုက်တွန်းနေကြပါတယ်။
အစိုးရအဆက်ဆက် မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမရှိကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သလို လက်ရှိ NLD အစိုးရထက်ထက်မှာလည်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား သတ်မှတ်ချက်မရှိကြောင်း ပြောဆိုထားပါတယ်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဖေသန်းက နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်က NLD အစိုးရလက်ထက် နိုင်ငံရေးပြစ်မှု၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား စတဲ့ ဝေါဟာရတွေအတွက် အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ပေးဖို့ ရှိ၊ မရှိ လွှတ်တော်မှာ မေးမြန်းခဲ့ပေမယ့် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ် အောင်စိုးက ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ တည်ဆဲဥပဒေတွေမှာ ဖော်ပြပါရှိခြင်းမရှိတာကြောင့် အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ဖွင့်ဆိုပေးရန် မရှိဘူးလို့ ဖြေကြားထားပါတယ်။
၂၀၁၉ ဧပြီလ ၂၂ ရက်နေ့ကလည်း အကျဉ်းစီးဌာနက အကျဉ်းထောင်တွေမှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဆိုပြီး သတ်မှတ်ထားတဲ့ အကျဉ်းသူ၊ အကျဉ်းသား မရှိဘူးလို့ ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
လက်ရှိ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်၊ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ တိုင်းဒသကြီးနဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်တွေ၊ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အများစုဟာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ဖြစ်ခဲ့ဖူးသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လက်ရှိ NLD အစိုးရလက်ထက် ၅ နှစ်သက်တမ်းမှာ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် သတ်မှတ်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိသလို နောက်ထပ် ၅ နှစ်အစိုးရသက်တမ်းမှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတွေ လိုလားနေတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်နိုင်ဖို့ ဘယ်လောက်အထိ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။